Musharax Cumar Sadiiq oo u taagan xilka duqa degmada Bosaaso oo ka hadlay qorshayn la’ aanta magaalada Bosaaso iyo qorshihiisa maamul(Dhagayso) – Radio Daljir
Seteembar 6, 2015 12:49 b 0
Bosaso , Sep, 6 – Musharax Cumar Cabdulaahi Cismaan (Cumar Sadiiq) oo u taagan qabashada xilka duqa magaalada Bosaaso ee xarunta ganacsiga iyo dhaqaalaha Puntland ayaa waxaa uu ka hadlay xaaladda guud ee magaalada Bosaaso iyo qorshihiisa dhow ee magaalada hadii uu ku guulaysto xilka duqa degmada Bosaaso.
Musharaxa oo waraysi siinayay radio Daljir ayaa sheegay kadib markii uu arkay baaba’a magaalada ka jira ee arimaha bulshada iyo qorshayn la’ aanta magaalada Bosaaso inay ku dhalisay inuu isku soo taago qabashada xilka duqa degmada , si uu wax uga qabto baahiyaha ay tabayso magaalada Bosaaso.
Waxaa uu sheegay inuu jirin sharciga wadida gawaarida , taraafikada oo aad shaqooyinkoodu u hoosayso , arimaha caafimaadka oo baahiyo badani ka jiraan sida xaafadadaha magaalada oo aan lahayn xarumo caafimaad oo dhamaystiran iyo adeeg caafimaad 24- saacadood ah.
Cumar Cabdilaahi Cismaan ayaa wax lagu qoslay ku tilmaamay magaalada Bosaaso inay lahayn (Town Planing) qorshayn magaalo tusaale ayaa waxaa uu usoo qaatay xaafadaha iyo wadooyinka oo magacyo aan lahayn badankood.
Waxaa uu sheegay xiriir fiican inuu la leeyahay masuuliyiinta magaalada Maneoples oo horay uu uga soo shaqeeyey ,isagoo intaasi raaciyay hadii uu ku gulaysto xilka duqa degmada Bosaaso in arimahaasi uu waxbadan ka qaban doono sida jaamacadaha magaalada Bosaaso ku yaala oo uu ku xiri doono magaalada Maniapoles oo horay ay magaalada Bosaaso la mataanowday.
Mar xildhibaanka wax laga waydiiyay arimaha golaha deegaanka ee magaalada Bosaaso oo khilaaf uu ka jiro tirada ay noqon doonto sida 27 xubnood iyo 29 xubnood ayaa waxaa uu soo jeediyay in sharciga nidaamka dowladaha hoose ee Law lambar 7 la raaco maadaama uu qorayo degmooyinka A, ee magaalo madaxda tiradeeda inay tahay 27 xubnood, isagoona intaasi ku daray labada xubnood ee dheeriga ah inuu ku daray madaxwaynihii hore Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole ayadoo baarlamaanka aan lasoo marsiin , sidoo kalena aan sharciga Law lambar 7 aan wax laga badalin , iyadoo uu madaxwaynuhu xiligaasi uu beelo gaar ah ku qancinayay sida Musharaxaxu uu sheegay.
Waxaa uu soo jeediyay hadii sharci darro lagu qanciyo beelo gaar ah in loo baahanyahay beelaha kale ee deegaanka aan xubnaha golaha deegaanka degmada Bosaaso ku lahayn in iyaguna la qanciyo.
DHAGAYSO: Barnaamijkii Caawa iyo Daljir iyo Wariye Maxamuud